သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ - YTpals
ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီသည် https://www.ytpals.com ဝက်ဘ်ဆိုက် (“ ဆိုက်”) မှအသုံးပြုသူများ (ရယူသူတစ် ဦး စီ) မှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကို YTpals စုဆောင်း၊ အသုံးပြု၊ ထိန်းသိမ်း၊ ထုတ်ဖော်ပုံကိုအုပ်ချုပ်သည်။ ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒသည်ဆိုက်နှင့် YTpals မှပေးသောထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အသုံးပြုသူများထံမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်စုဆောင်းနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသည့်အခါ၊ ဆိုက်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အမှာစာပေးခြင်း၊ သတင်းလွှာတွင်စာရင်းသွင်းခြင်း၊ ပုံစံတစ်ခုကိုဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်ပြုလုပ်သောအခြားလှုပ်ရှားမှုများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အင်္ဂါရပ်များသို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များ။ အသုံးပြုသူများကိုသင့်လျော်သည့်အတိုင်းအမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ မေးလ်လိပ်စာတောင်းခံနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရက်ဒစ်ကဒ်အချက်အလက်ကိုမကောက်ယူပါ။ သို့သော်အသုံးပြုသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုအမည်ဝှက်ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သုံးစွဲသူများထံမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသူတို့မှဆန္ဒအလျောက်တင်ပြမှသာကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းမည်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောလှုပ်ရှားမှုအချို့တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည် မှလွဲ၍၊
သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုနှင့်အတူအပြန်အလှန်အခါတိုင်းကျနော်တို့အသုံးပြုသူများနှင့် ပတ်သက်. Non-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖော်ထုတ်ခြင်းသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းလိမ့်မည်။ non-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖော်ထုတ်ခြင်းအချက်အလက်များကို browser ကိုအမည်, ကွန်ပျူတာနှင့်ထိုကဲ့သို့သော operating system နဲ့အင်တာနက်ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးအသုံးပြုသွားမည်နှင့်အခြားအလားတူသတင်းအချက်အလက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုမှချိတ်ဆက်မှုအသုံးပြုသူများနည်းလမ်းများအကြောင်းကိုနည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များအမျိုးအစားပါဝင်နိုင်သည်။
web browser cookies တွေကို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူအတှေ့အကွုံမြှင့်တင်ရန်အတွက် "cookies တွေကို" သုံးနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုသူရဲ့ web browser ကိုစံချိန်တင်-စောင့်ရှောက်ရည်ရွယ်ချက်များအဘို့မိမိတို့ hard drive ပေါ်တွင် cookies တွေကိုထားနှင့်တစ်ခါတစ်ရံသူတို့ကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုခြေရာခံရန်။ အသုံးပြုသူ cookies တွေကိုငြင်းဆန်ဖို့၎င်းတို့၏ web browser ကိုတင်ထားရန်, သို့မဟုတ် cookies များကိုစေလွှတ်တော်မူလျက်ရှိသည်အခါသင်သတိပေးဖို့ရှေးခယျြနိုငျသညျ။ သူတို့ပြုလျှင်ဆိုက်အချို့ကိုအစိတ်အပိုင်းများစနစ်တကျလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမပြုစေခြင်းငှါသတိပြုပါ။
- ဖောက်သည်များ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေရန် - သင်ပေးသောသတင်းအချက်အလက်များသည်သင်၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုတောင်းဆိုချက်များကိုတုန့်ပြန်ရန်နှင့်အထောက်အပံ့လိုအပ်ချက်များကိုပိုမိုထိရောက်စွာကူညီပေးသည်။
- ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အားတိုးတက်စေရန် - ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်စေရန်သင်ပေးသောတုံ့ပြန်ချက်ကိုသုံးနိုင်သည်။
- အရောင်းမြှင့်တင်ရေး၊ ပြိုင်ပွဲ၊ စစ်တမ်းသို့မဟုတ်အခြားဆိုက်၏အင်္ဂါရပ်ကိုဖွင့်ရန်။ သူတို့စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သောအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်ပြီးလက်ခံရန်သူတို့သဘောတူသည့်အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသူများကိုပေးပို့ရန်။
- အခါအားလျော်စွာအီးမေးလ်များကိုပေးပို့ရန်အသုံးပြုသူ၏သတင်းအချက်အလက်နှင့်၎င်းတို့၏အမိန့်နှင့်ပတ်သက်သောနောက်ဆုံးသတင်းများကိုပေးပို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုသုံးနိုင်သည်။ ၄ င်းတို့၏မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းများ၊ မေးခွန်းများနှင့် / သို့မဟုတ်အခြားတောင်းဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်ရန်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စာပို့စာရင်းသို့ဝင်ရောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါကကုမ္ပဏီသတင်းများ၊ နောက်ဆုံးသတင်းများ၊ ဆက်စပ်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များပါ ၀ င်သောအီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ အကယ်၍ အသုံးပြုသူသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုနောင်လာမည့်အီးမေးလ်များကိုလက်မခံလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ပါဝင်သည်။ အီးမေးလ်တစ်ခုစီ၏အောက်ခြေရှိညွှန်ကြားချက်များကိုဖျက်သိမ်းပါ။
ကျွန်တော်တို့ဟာသင့်လျော်တဲ့အချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်း, သိုလှောင်မှုနဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့အလေ့အကျင့်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်, အပြောင်းအလဲတချို့, ထုတ်ဖော်သို့မဟုတ်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်, အသုံးပြုသူအမည်, စကားဝှက်, ငွေပေးငွေယူသည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အချက်အလက်များ၏ဖျက်ဆီးခြင်းဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်လုံခြုံရေးအစီအမံချမှတ်။
ဆိုက်နှင့်၎င်း၏အသုံးပြုသူများအကြားအထိခိုက်မခံနှင့်ပုဂ္ဂလိက data တွေကိုဖလှယ်တဲ့ SSL ကိုလုံခြုံဆက်သွယ်ရေးလိုင်းကိုကျော်ဖြစ်ပျက်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်ပေါင်းနဲ့ encrypt နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။
ကျွန်တော်တို့သည်ကုန်သွယ်ရောင်း, ဒါမှမဟုတ်အခြားသူများအားအသုံးပြုသူများသည်ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ခြင်းသတင်းအချက်အလက်ငှားကြဘူး။ ကျနော်တို့အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ, ယုံကြည်စိတ်ချရသော affiliates နှင့်ကြော်ငြာရှင်များနှင့်အတူဧည့်သည်များနှင့်သုံးစွဲသူများနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်သတင်းအချက်အလက်ချိတ်ဆက်မရယေဘုယျစုပေါင်းလူဦးရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်မျှဝေနိုင်ပါသည်။
YTpals တွင်ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒအားအချိန်မရွေးအသစ်ပြောင်းရန်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကြှနျုပျတို့ပွုလုပျသောအခါကြှနျုပျတို့သညျဤစာမကျြနှာ၏အဖွစျအပွားမှာနေ့စဉျအသစျပွုပွငျပွောငျးလဲမညျ။ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုသတိပြုရန်အတွက်ဤစာမျက်နှာကိုမကြာခဏစစ်ဆေးရန်အသုံးပြုသူများကိုကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။ ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒအားအခါအားလျော်စွာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုသတိပြုမိခြင်းမှာသင်၏တာ ၀ န်ဖြစ်ကြောင်းသင်အသိအမှတ်ပြုသည်။
ဒီဆိုက်ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဤမူဝါဒ၏သင့်ရဲ့လက်ခံမှုကိုဆိုလို။ သင်ဤမူဝါဒသဘောမတူဘူးဆိုရငျ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုမသုံးကြဘူးပါ။ ဤမူဝါဒအပြောင်းအလဲများကို၏ပို့စ်ကိုအောက်ပါဆိုက်သင်၏ဆက်လက်အသုံးသူတို့အားအပြောင်းအလဲများသင့်ရဲ့လက်ခံမှုယူဆကြလိမ့်မည်။
ဤစာရွက်စာတမ်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်